လှကျော်ဇော - လူထုကျန်းမာရေးစနစ်သစ် - ၄ - MoeMaKa Media
Home / China / Community / Coronavirus / Experience / Hla Kyaw Zaw / လှကျော်ဇော - လူထုကျန်းမာရေးစနစ်သစ် - ၄
လှကျော်ဇော - လူထုကျန်းမာရေးစနစ်သစ် - ၄
(မိုုုုုးမခ)ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၂၀
တလှေတည်း စီး တခရီးတည်းသွားနေသူများ
အခုအခါ ကျွန်မတို့တတွေ တကမ္ဘာလုံးလှေကြီးတစင်း ပေါ်ရောက်ကြတာ။ နေလုံး ဝိုင်းပြီးတက်ညီလက်ညီ အားစိုက်လှော်ကြရင်ဖြင့် ဒီကိုဗစ်၁၉ ကပ်ရောဂါ လေမုန်တိုင်းကြီးကို အောင်မြင်စွာ ကျော်နိုင်မှာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ တယောက်တပေါက် လှော်ချင်သလိုလှော်ကြရင် အားလုံးစုံးစုံးမြုပ်ကုန်လိမ့်မယ် ... တဲ့။
စပိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ တရုတ်မီဒီယာနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း (CGTN) တခုမှာ ပြောသွားတာပါ။
ဧပြီ (၂၆) ရက်မှာတော့ ဟူပေပြည်နယ် ဝူဟန့်မှာ ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါသည် တယောက်မှ မရှိတော့ဘူး။အားလုံး ဆေးရုံက ဆင်းသွားကြပြီ။ နောက်လူနာအသစ် မတွေ့တာလည်း အရက်(၂၀) ကျော်သွားပြီးလို့တရုတ်သတင်းက ကြေညာသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်မှာ ဒုတိယလှိုင်း ဝင်လာမှာ ကြောက်နေရပါတယ်။
နိုင်ငံခြားက ပြန်လာကြတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ (ကျောင်းသာ၊ အလုပ်သမား ၊ ခရီးသွား စသဖြင့်) ဆီကပါ။ အခုတောင် တရုတ်ရုရှားနယ်နိမိတ်မြို့များကို ပိတ်ချလိုက်ရပြန်ပါပြီ။ ဒီတော့ တရုတ်မှာ သူ့တနိုင်ငံတည်းရောဂါပျောက်အောင် လုပ်ရေး ဆိုတာ မဖြစ်နိင်ပါဘူး။ ဒါကို တရုတ်ကအစောကြီးကတည်းက မြင်ပုံရပြီးပြင်လည်းပြင် ခဲ့ပါတယ်။
ဂလိုဘယ်လာဇေးရှင်းခေတ်မှာ ဖြစ်လာတဲ့ ကူးစက်ရောဂါ (ကပ်ရောဂါ) ကို တကမ္ဘာလုံးချီတဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့သာ ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။
၂၀ဝ၃ခုနှစ် ဆားစ်ရောဂါကြီးနဲ့ ကြုံတွေ့ရပြီးနောက် တရုတ်တွေအနေနဲ့ သူတို့စနစ်ရဲ့ အားနည်းချက်များကိုတဘက်ကပြင်သလို ရေရှည်သေနင်္ဂဗျူဟာ ခြေလှမ်းများကို လှမ်းလာတာတွေလည်း တွေ့လာရပါတယ်။(တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ တံခါးဖွင့်ပေါ်လစီရဲ့ အစိတ်အပိုင်းများလည်း ဖြစ်ဟန်ရှိပါတယ်။)
ဥပမာ - သုတေသနလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးမှာ နိုင်ငံခြားပညာရှင်များကို ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးပြီး တရုတ်ပြည်ကို ဖိတ်ခေါ် လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်စေတာမျိုး၊ တရုတ်ပညာတော်သင် အများအပြားကို တကမ္ဘာလုံးအနှံ့လွှတ်ပြီး ပညာရှာစေတာမျိုး၊ စတာတွေပါ။ ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ လူပုဂွိုလ်အချင်းချင်းကြားတွေမှာ ဆက်ဆံရေးတွေ နားလည်မှုတွေ တည်ဆောက်ထားလာတာပါ။ (people to people exchange) အခုလည်း ဒီရောဂါကပ်ဘေးဆိုးကြီးဒဏ် ခံလိုက်ရချိန်မှာ တရုတ်ပြည်အနေနဲ့ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများကိုရော ၊နိုင်ငံတကာခြေလှမ်းများကိုရော တပြိုင်တည်းလှမ်းခဲ့တာပါ။
လူသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ သာယာဝပြောရေးဟာ အန္တရာယ်ကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ ဒီလို အကျဉ်းအကျပ် ကာလမှာ ရှေးအယူအဆဟောင်းတွေ၊ မဟုတ်မတရားစွပ်စွဲချက်များအပေါ် နောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ အဖြစ်အပျက်အမှန်များက အနိုင်ရဖို့လိုပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးရှိ နိုင်ငံများအနေနဲ့ မိမိတာဝန် မိမိယူပီး ရောဂါပျံ့နှံ့လာမှုကို ထိန်းဖို့ အလွန်အရေးကြီးလာချိန်ပါ။ ဒီရောဂါကပ်ဘေးဆိုးရန်သူကို နောက်ဆုံးမှာအနိုင်ရဖို့ အကောင်းဆုံးနဲ့ အခိုင်မာဆုံးကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကို ပူးပေါင်းရှာဖွေပြီး ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှ ဖြစ်မှာပါ ... တဲ့။
တရုတ်က ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလကုန် (တရုတ်ပြည်ဝူဟန်မှာ အကြီးအကျယ် လုံးပန်းနေရစဉ်) အီရန်မှာ ရောဂါတွေ စတွေ့တယ်ဆိုတာနဲ့ တရုတ်ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့တဖွဲ့ကို စေလွှတ်လိုက်တာပါ။ (အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အီရန်ဟာ အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုအမျိုးမျိုးကြောင့် အတော်ချည့်နဲ့နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူနိုင်ငံ မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင်ဖြစ်ရင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတခုလုံး အန္တရာယ်ကြီးပါ။ ဒါ့အပြင် အီရန်က တရုတ်မှာ ရောဂါစကာစ အလွန်ခက်ခဲနေချိန်မှ ာသူရှိစုမဲ့စုဆေးပစ္စည်းလေးတွေ တရုတ်ဆီပို့လှုဒါန်းခဲ့တာပါ။ ဒါကို တရုတ်က ဂရုဏာသက်ပြီး အသိအမှတ် ပြုထားတာပါ။) တရုတ်ပညာရှင်များက သူတို့အတွေ့အကြုံတွေပေါ် အခြေခံပြီး အကြံဉာဏ်တွေ အချိန်မီ ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အီရန်ကလည်း လိုက်နာပြီ းသီးခြားဆေးရုံတွေ ဖွင့်တာ၊ ကုသမှုတွေကို စနစ်တကျ ထိန်းညှိတာ စတဲ့ တရုတ်လုပ်ဟန်တွေကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ အီရန်ရဲ့ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးမှာ အများကြီး အကျိုးရှိ စေလိုက်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဥရောပနိုင်ငံများထဲက ပထမဆုံး ကိုဗစ်ရောဂါ စဖြစ်တဲ့ အီတလီကို မတ်လ (၁၂) ရက်နေ့မှာ တဖွဲ့၊ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာတဖွဲ့ ၊ မတ်လ (၂၅) ရက်မှာ တဖွဲ့၊ စုစုပေါင်း ဆေးအဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ကို ဆေးဝါးပစ္စည်း လေယာဉ်တစီးစာ တွေနဲ့အတူ တရုတ်က ပေးပို့ကူညီခဲ့ပါတယ်။ အီတလီက သူ့နိုင်ငံ စဖြစ်ဖြစ်ချင်း ဥရောကသမဂွကို အကူအညီတောင်းတာပါ။ အဲဒီက မရမှ တရုတ်ကို လှမ်းတောင်းတာပါ။ နောက်ပိုင်း အီးယူဥက္ကဋ္ဌက ပြန်တောင်းပန်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဂျာမနီကလည်း နောက်ပိုင်းမှာ အီတလီကို အကူအညီတွေလှမ်းပေးတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ တဦးကိုတဦး ရိုင်းပင်းတဲ့ လုပ်ဟန် ပေါ်လာတာကို ပြသနေပါတယ်။ နောက်ကျေကောင်း နောက်ကျနိုင်ပေမယ့် ကောင်းတဲ့လုပ်ဟန်များဖြစ်တဲ့အတွက် နောင်သင်ခန်းစာယူစရာပေါ့။
မတ်လဆန်း တရုတ်ပြည်က ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေ တစုံတရာ အပေါ်စီးရလာချိန်ကစပြီးတရုတ်ပြည်ဟာ တကမ္ဘာလုံးက နိုင်ငံပေါင်း (၁၂၀) ကျော် ကို ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူ တတ်နိုင်သမျှဆေးဝါးပစ္စည်းတွေပါ ပို့လွှတ်ကူညီနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဆေးပညာရှင်များရဲ့ အကူအညီကိုပါ တောင်းခံတဲ့(ဆားဗီးယား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ပါကစ္စတန်၊ ဖီလစ်ပိုင်၊ လာအို၊မြန်မာ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီရှား စတဲ့) နိုင်ငံများကို ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့များလွှတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများရဲ့ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေအပေါ် လေ့လာသုံးသပ်ပေးပြီး ကုသမှုဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဉာဏ်တွေပါ ပေးတာ၊ လိုအပ်တဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို လှုဒါန်းတာ စတာတွေ လုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ လက်ခံရယူတဲ့နိုင်ငံများက ဆေးပညာရှင်များကလည်း အလွန်ကျေးဇူးတင်ကြ တန်ဖိုးထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ လူထုကျန်းမာရေးစနစ်အားနည်းတဲ့နိုင်ငံများကို တစုံတရာအားဖြည့်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို တရုတ်ပညာရှင်တွေက လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
တရုတ်က နောက်လမ်းတလမ်း ဖွင့်တာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနအပါအဝင် အစိုးရဌာနများအကူအညီနဲ့ တရုတ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်က မတ်လ(၃)ရက်နေ့ကစလို့ တကမ္ဘာလုံးက ပညာရှင်များနဲ့ ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်များ ဖွင့်လိုက်နိုင်တာပါပဲ။ တရုတ်ပြည်က လက်ရှိ ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးမှာ ပါဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဆေးဝန်ထမ်းများနဲ့ ဆွေးနွေးကြတာပါ။ အလွန်ပွဲစည်တာတွေ့ရပါတယ်။ တပတ်ကို (၂) ကြိမ် ကျ လုပ်နေတာပါ။
ဒီရောဂါပိုးက အသစ်အဆန်းဖြစ်နေလေတာ့ နိုင်ငံအသီးသီးက ဆေးဝန်ထမ်းများက တရုတ်ပညာရှင်များဆီက သူတို့အလွန်သိချင်နေတဲ့ အချက်တွေကို အငမ်းမရ မေးကြမြန်းကြပါတယ်။ တရုတ်တွေကလည်း သူတို့ သိသမျှမြင်သမျှတွေကို မခြွင်းမချန်ပြောဆိုပါတယ်။ သူတို့မသိသေးတဲ့ အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူတို့လုပ်မိခဲ့တဲ့အမှားများပဲ ဖြစ်ဖြစ်(နောက်ထပ် ခင်ဗျားတို့ ထပ်မမှားစေချင်လို့ တဲ့) ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း
အကုန်ပြောပြတာပါ။ ဒါကို နိုင်ငံခြားက ဆေးဝန်ထမ်းများက သိပ်သဘောကျပုံရပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ပြီး ဒီကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ (ဥပမာကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရေး)အတွက် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရေးလမ်းတွေကို ရှာကြပါတော့တယ်။
တကယ်တော့ တရုတ်တွေဟာ တပ်ပေါင်းစုလုပ်ငန်းတွေမှာ အတော်ညက်ပါတယ်။
ဥက္ကဋ္ဌ မော်စီတုန်းက ၁၉၄၉ တော်လှန်ရေး အောင်ခါနီးမှ ာ(ပြည်သူ့အတိုင်ပင်ခံ ကွန်ဖရင့် လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေချိန်) သူ့လူတွေကို ပညာပေးဖူးတာ ရှိပါတယ်။ တို့တပ်က တပြည်လုံးကို နိုင်အောင် တိုက်နိုင်ရင်တောင် တို့ ကွန်မြူနစ်များက အနည်းစုသာဖြစ်တယ်။ တို့နိင်ငံကြီးကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာမှာ တနိုင်ငံလုံးပြည်သူတွေ ပူးပေါင်းပါဝင်လာမှ ဖြစ်မှာ၊ ဒီတော့ တို့နိုင်ငံကြီး ဆင်းရဲစုတ်ချာနေမှုအပေါ် စိတ်နာနေတဲ့ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ တိုင်းပြည်ကြီးကို ကယ်တင်ချင်တဲ့ ပညာရှင်တွေအားလုံးနဲ့ တို့ ပူးပေါင်းနိုင်မှ တို့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေး အောင်မြင်မှာ ... တဲ့။
ကြည့်ရတာ ဒီတပ်ပေါင်းစုပေါ်လစီကို အခုခေတ် တရုတ်ကွန်မြူနစ်များက သူ့ခေတ် သူကာလနဲ့အညီ မမေ့မလျှော့ ဆက်လက် ကျင့်သုံးနေပုံပဲ။
တရုတ်-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးဟာ အတော်အထိမခံဖြစ်နေချိန်ပါ။ သမ္မတထရန့် ပြောကြားချက်များပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပွန်ပီရို စွပ်စွဲပြောနေတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခြာနိုင်ငံရေးသမားတွေ ဆေးပညာရှင်တွေ ဘာတွေပဲ ပြောနေနေ။ တကယ့်ရှေ့တန်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြရတဲ့ အမေရိကန်ဆေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ တရုတ်ပညာရှင်တွေက ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့က ပြုလုပ်သွားတဲ့ ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှာ အမေရိက၊ ပရင့်စတန်ဆေးတက္ကသိုလ် ဗဟိုဌာနက ဆေးပညာရှင်များနဲ့ (Princeton MedicalCentre) ဝူဟန့်ရောက်နေတဲ့ ပီကင်းဆေးတက္ကသိုလ်ဆေးရုံအထူးကြပ်မတ်ဆောင်ဆိုင်ရာ (ICU) ဆရာဝန်များနဲ့ ဆွေးနွေးခန်းမှာ အမေရိကန်ဆရာဝန်များရဲ့မေးခွန်းအများအပြားကို တရုတ်ဆရာဝန်များက ဖြေဆိုကြပါတယ်။ အပြန်အလှန်မေးမြန်းတာတွေ၊အပြန်အလှန်အကြုံပြုတာတွေလည်း ပါပါတယ်။ တနာရီ ကျော် ကြာတဲ့ အဲဒီဆွေးနွေးခန်းက အကြောင်းအရာလေးတခုကို ပြောပြချင်တာပါ။
အမေရိကန်ဆရာဝန်ကြီးက ... တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ ဆေးဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ကြီးတာတွေရှိပါတယ်။ တချို့ဆို တာဝန်မထမ်းဆောင်ဘူးလို့ ငြင်းဆိုတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။အဲဒီပြသာနာတွေကို ခင်ဗျားတို့တတွေဘယ်လို ဖြေရှင်းပေးသလဲ ... တဲ့။
ဒီတော့ တရုတ်ဆရာဝန်များက ... ကျွန်တော်တို့တွေဟာ လူသားတွေသာဖြစ်တဲ့
အတွက် ကြောက်တာတွေ၊ စိုးရိမ်တာတွေ ရှိမယ်ဆိုတာ သဘာဝပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာလည်း ရှိပါတယ်။ဒါ တွေကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဘယ်လို ကျော်ဖြတ် ခဲ့သလဲ။
၁။ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းဖြေရှင်းမှု။ ကျွန်တော်တို့တတွေ ဒေသ၊ ဆေးရုံ၊ ဌာန မတူကြပါဘူး။ ဒီမှာလာဆုံကြတော့ ပထမဆုံးက ဘာကိစ္စမဆို စုပေါင်းတိုင်ပင် ဖြေရှင်းကြပါတယ်။ အရေးပေါ်သင်တန်းတွေလည်း အတူတူတက်ကြရပါတယ်။ ပြဿနာပေါ်လာရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မတင်ဘဲ အားလုံးတာဝန်ယူကြပြီး နောင်ထပ်မဖြစ်ရေးအတွက် နည်းလမ်းတွေ ရှာကြပါတယ်။ အလွန်အားဖြစ်စေတဲ့ လုပ်ဟန်ပါ။
၂။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် ကောင်းမွန်ခိုင်မာတဲ့ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေ အပြည့်အစုံရှိနေမှုကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။အစ ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရောက်စ(ဖေဖါ်ဝါရီလဆန်းပိုင်း)ဘာပစ္စည်းမှမြပည့်စုံပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အစိုးရက စက်ရုံတွေကိုအမြန်နှုန်းနဲ့ ချုပ်ခိုင်းလိုက်နိုင်တာကြောင့် နောက်ပိုင်း မပူရဖြစ်သွားတာပါ။
၃။ အခု ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဆေးရုံမှာကို ဓာတ်ခွဲခန်းဖွင့်ထားပြီး (ဒါကလည်း အစိုးရက အချိန်မီ လုပ်ဆောင်ခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးလို့) ကိုယ်ပူချိန်တက်တဲ့ ၊ မအီမသာဖြစ်နေတဲ့ ဆေးဝန်ထမ်းတွေကို အချိန်မရွေး စစ်ဆေးပေးနေပါတယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းအဖြေ (ဘာမှမဖြစ်ကြောင်း- negative)
ရသွားတဲ့အခါ အဲဒီဆေးဝန်ထမ်းကို ပြန်အလုပ်တက်ခိုင်းရပါတယ်။ သူလည်း စိတ်အေးတာပေါ့။
၄။ ဒါ့အပြင် စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာ အထူးဆရာဝန်များလည်းရှိပြီးအချိန်မရွေး သွားရောက် ဆွေးနွေး တိုင်ပင်နိုင်ကြပါတယ်။ (psychiatric counselling)
၅။ နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ ဆေးဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ လူနာကုသရေးကိုပဲ အဓိကထား လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားဖို့လိုပါတယ်။ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ ကိစ္စမျိုး (ဥပမာ - နှာခေါင်းစည်းကိစ္စ)ကို ခေါင်းထဲထည့်မထားဖို့ပါပဲ ... တဲ့။ (ဒါကို ထည့်ပြောတာကတော့ အစောပိုင်းဆွေးနွေးတုန်းက အမေရိကန်ဆရာဝန်ကြီးက သူတို့ဆီမှာ ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံတွေ (နှာခေါင်းစည်းကအစ မလုံလောက်မှုတွေကို ပြောသွားလို့ပါ။)
အဆုံးသတ်မှာတော့ ... အဓိကအားဖြင့်တော့ စိတ်ဓာတ်အရ တို့တတွေ ညီညီညာညာ ရှိသမျှအင်အားစိုက်ထုတ်ပြီး ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ရင် ဒီတိုက်ပွဲ မုချနိုင်မယ် ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ရှိထားဖို့ပါပဲ ... တဲ့။
ဒီလိုနည်းနဲ့ တရုတ်ဆရာဝန်များဟာ အမေရိကန်ဆရာဝန်များအပေါ် နားလည်စာနာမှုရှိစွာနဲ့ သူတိုနိုင်ငံရဲ့အားသာချက်ဖြစ်တဲ့ အစိုးရရဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံက ပါဝင်ဖြေရှင်းပေးနေမှုတွေနဲ့ သူတို့တတွေရဲ့ အခြေခံနိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်တွေကို သွယ်ဝိုက်စွာ ပြောပြသွားတာပါ။
ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နဲ့ စိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေတဲ့ အမေရိကန်ဆေးပညာရှင်များကို ကြည့်ပြီး တရုတ်တွေရဲ့ တပ်ပေါင်းစုလုပ်ဟန်တွေကို သတိပြုလိုက်မိပါတော့တယ်။
1. Beijing Review.2-4-2020.
2. Beijing Review.16-4-2020.
3. CGTN-Covid19-Frontline 22-3-2020.
လှကျော်ဇော - လူထုကျန်းမာရေးစနစ်သစ် - ၄ Reviewed by MoeMaKa on 9:16 AM Rating: 5